Colaada Tigray: “Awowgey ayaa lagu amray inuu i kufsado balse geeri ayuu ka doorbidey “ | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Colaada Tigray: “Awowgey ayaa lagu amray inuu i kufsado balse geeri ayuu...
Gabadh iskuuleey ah oo reer Itoobiya ah ayaa BBC-da u sheegtay sida ay ku weysay gacanteeda midigta ah. Waxay sheegtay inay markaasi ay iska difaaceysay askari isku dayay inuu kufsado. Askariga ayaa sidoo kale isku dayay inuu awowgeed ku khasbo inuu u galmooda iyada.
Gabadhan oo 18 sanno jir ah oo aan magaceeda la shaacineyn ayaa ku jirtay isbitaal ku yaalla waqooyiga gobolka Tigrey muddo laba bilood ah si ay uga soo kabato dhaawacii soo gaaray.
Colaada ka jirta Tigray, ayaa billaabatay horraantii bishii Nofeembar ee sanadkii hore markii ra’iisal wasaare Abiy Axmed uu billaabay guluf colaadeed oo uu meesha uga saarayo xisbiga hayay talada gobolka ee TPLF. Collaadaasi ayaa burburisay riyadii gabadhan iyo kuwa badan oo ay isku fasal ahaayeen.
Intooda badan, oo ay wehliyeen qoysas kale ee ku nool magaaladooda, waxay u qaxeen buuraha – xitaa ka dib markii Mr Abiy, oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize, uu ku dhawaaqay guul ka dib qabashadii caasimadda Tigray, Mekelle, ee ciidamada federaalka la wareegeen 29kii Noofambar.
Sababtuna waxay tahay ciidammada ammaanka ayaa billaabay howlgalo ay ku ugaarsanayaan xubnaha kooxda TPLF ee diiday inay is dhiibaan, taas oo dhalisay eedeymo ku saabsan xadgudubyo ba’an oo xuquuqda aadanaha ah oo lagula kacay dadka deegaanka Tigray. Masuuliyiintu way beeniyeen eedaha loo soo jeediyay.
Gabadha ardayda ah iyo awoowgeed ayaa ku haray gurigooda oo ku yaalla magaalada Abiy Addi, oo qiyaastii 96km galbeed ka xigta Mekelle.
3-dii bisha Diseembar, gabadh da’a yar ayaa sheegay in askari, ku labisnaa dharka militariga Itoobiya, uu soo galay gurigooda isagoo dalbanaya inuu ogaado halka ay ku sugan yihiin ciidammada Tigray.
Kaddib markii uu baaray guriga oo uu waayay cidna, wuxuu ku amray inay sariir ku jiiftaan wuxuuna bilaabay inu xabbado argagax gelin ah rido.
“Kadib wuxuu ammar ku siiyay awoowgay inuu ila galmoodo. Awoowgay aad ayuu u xanaaqay … waxayna bilaabeen inay dagaalamaan,” ayay tiri.
Waxay ay sidoo kale sheegtay in askariga uu awoowgeed banaanka u saaray uuna halkaas ku toogtay ka dibna uu iyada ku soo noqday isaga oo leh waan dilay.
“Wuxuu yiri:” Cidna hadda kuma badbaadin karto. Dharka iska siib. ” Waxaan ka baryay inuusan sameynin laakiin marar badan ayuu feer igu dhuftay. “
“Dhowr daqiiqo ayaan la dagaalamaayay ” in kasta oo ay dareentay xanuun ka soo gaaray nabarradii, muddo kaddib askarigii ayaa intuu ku xanaaqay ayuu qorigii ku qabtay.
“Wuxuu iga toogtay gacanta midig, lugtana seddex jeer ayuu iga toogtay. Wuu baxey markii uu rasaas ka maqlay banaanka.”
Nasiib wanaag awoowgeed weli wuu noolyahay, in kasta oo uu miyir la’aan ahaa laba maalin. Waxay ku sii jireen gurigooda iyaga cabsanaya oo dhaawacna ah.
Dhacdada gabadhan ayaa dib u soo xoojisay walaacyada la xiriira kiisaska kufsiga ee gobolka Tigray.
Waxay sheegtay in ay jiraan “warbixino laga naxo oo ku saabsan shakhsiyaad la sheegay in lagu qasbay in ay kufsadaan dad ka tirsan qoyskooda, iyagoo loogu hanjabayo in ay dili doonan.
“Haweenka qaarkood ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ciidamada milateriga ay ku qasbeen inay badeecooyinka aasaasiga ay ku badeshaan, halka xarumaha caafimaadkuna ay muujiyeen inay kordheen baahida ka hortagga uurka degdega ah iyo baaritaanka cudurrada galmada lagu kala qaado, taas oo inta badan tilmaam u ah kiisaska kufsiga oo kor u kacay. “
Dhakhtar iyo xubin ka tirsan urur u dooda arrimaha haweenka ayaa BBC-da u sheegay in bishii Janaayo ay ka diiwaangeliyeen ugu yaraan 200 gabdhood oo ka yar 18 sano cisbitaalo kala duwan iyo xarumo caafimaad oo ku yaalla Mekelle kuwaas oo sheegay in la kufsaday.
Intooda badan waxay sheegeen in dambiilayaasha ay xirnaayeen labiska ciidamada Itoobiya waxaana looga digay inay raadsadaan gargaar caafimaad.
“Waxaa ku yaalLa nabarro, mid ka mid ah gabdhahaan waxaa la haystay muddo toddobaad ah. Mana jirto boolis, sidaa darteedna caddaalad ma leh,” ayuu yiri dhakhtarku.
“Waxaan sidoo kale maqalnay sheekooyin naxdin leh oo la mid ah oo ka imanaya meelo kale oo ka tirsan Tigray. Laakiin arrimaha gaadiidka awgood ayaan u caawin kari waynay. Waa wax laga xumaado.”
Dumar badan ayaa lagu kufsaday magaalada Mekelle si bareer ah si loo jebiyo niyadda dadka, looGUNA hanjabo inay ka tanaasulaan dagaalka. “
Taliyaha ciidanka Itoobiya Birhanu Jula Gelalcha, ayaa beeniyay eedeymaha noocan ah.
“Ciidankeennu kufsadaan. Ma ahan burcad, waa xoogag dowladda ka tirsan. Ciidamada dowladuna waxay leeyihiin anshax iyo xukun ku habboon.,” ayuu u shegay BBC-da.
Atakilty Hailesilasse, oo ah duqa kumeelgaarka ah ee loo magacaabay Mekelle, ayaa sheegay in qiyaasaha ay soo gudbiyeen kooxaha xuquuqda dumarka u dooda ay yihiin kuwo si weyn loo buunbuuniyey.
Dawladdu waxay dhawaan u dirtay guddi-baaritaanTigray si ay u sii baaraan eedaymahan, oo ay ku jiraan dad ka socda wasaaradaha haweenka iyo caafimaadka iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud, in kasta oo aan weli la haynin warkoodii oo dhammaystiran.
Todobaadkii la soo dhaafey Gudiga Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya ayaa sheegey in 108 kiis oo kufsi ah la soo sheegey labadii bilood ee ugu danbeysey guud ahaan gobolka Tigreega, in kasta oo ay qireen “ururada dowladda sida booliska iyo xarumaha caafimaadka ee dhibanayaasha xadgudubka galmada ay u soo jeestaan ​​inay soo sheegaan dambiyada noocaas ah.
“Waxaan rabaa inaan Injineer noqdo”
Kiiska Abiy Addi, ayaa BBC-da waxa soo wargeliyay dhakhtarkii gabadhan da’da yar gacanta ka gooyay.
Awoowgeed ayaa hadda kasoo bogsooday dhaawicii soo gaaray, laakiin gabadha ayaa wali waxay ubaahantahay daryeel caafimaad kadib markii gacanta laga gooyay.
Waxay BBC-da kula hadashay sariirteeda isbitaalka, iyadoo ka ilmaynaysa riyadeedii luntay.
Sanadkeedii ugu dambeeyay ee iskuulka kahor inta uusan dagaalku billaaban, hamigeedu wuxuu ahaa in ay aado jaamacad si ay u barato injineernimada si ay u daryeesho awoowgeed, oo soo koriyay tan iyo markii ay hooyadeed dhimatay.
Previous articleToban sano kadib, xagey ku dambeeyeen qoyskii Mucammar Qadaafi?
Next articleDHAGEYSO: Mucaaradka Oo Go’aan Kale Kasoo Saaray Banaanbaxa Jimcaha
Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Somaliya oo Amar Culus Duldhigay Haayadaha Amaanka DFS
Madaxda Qaranka Iyo Kuwa Maamul-Gobaleedka Ma Ka Dhabayn Doonaan Is-Cafinta Iyo Isku Tanaasulka Siyaasadeed ?
KASHIFAAD: Xil la wareegida Rooble oo dab ku shiday qalalaasaha dhinaca dastuurka
Meydka Gudoomiyihii gobolka Banaadir oo goordhaw laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde
Wadooyinka Muqdisho oo saakay xiran & Shacabka oo hal su’aal is-weydiinaya
XOG: Baacsi ku socda saaxiibadii Kheyre & Wasiir Isloow oo shaqo joojin lagu sameeyay
Daawo Sawiradda sida Qalbi Dhagax loogu soo Dhaweeyay MagaaladaHargeysa
Dowlada Somalia oo War ka soo saartay duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab